Tag: kukosha | Martech Zone
Nei Kune 542 Banana Hanger paAmazon
Mugovera, March 13, 2021 Mugovera, March 13, 2021 Douglas Karr
Kune mazana mashanu nemakumi maviri nemaviri emabhanana akasungirirwa paAmazon… ari pakati pemutengo kubva pa $ 542 kusvika pa $ 5.57. Anorema asingadhure emabhanana mahokoreti akareruka aunokwira pasi pekabati rako. Iyo inodhura kwazvo bhanana hanger iyi yakanaka Chabatree bhanana hanger iyo yakagadzirwa nemaoko uye inogadzirwa neyakagadzikana huni zviwanikwa. Zvakakomba… ndakavatarisa. Ndakaverenga mhedzisiro, ndikairongedza nemutengo, ndobva ndaita imwe yekutsvagisa hanger yebhanana. Pari zvino,
Maitiro Ekuvaka Kwangu Mamiriyoni emadhora eB2B Bhizinesi Ine LinkedIn Vhidhiyo
China, December 10, 2020 China, December 10, 2020 Jackie Hermes
Vhidhiyo yakanyatso kuwana nzvimbo yayo seimwe yeanokosha maturusi ekushambadzira, iine 85% yemabhizinesi anoshandisa vhidhiyo kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekushambadzira. Kana tikangotarisa kushambadzira kweB2B, 87% yevatengesi vevhidhiyo vakatsanangura LinkedIn senzira inobudirira yekuvandudza kutendeuka kwemitengo. Kana B2B vanamuzvinabhizimusi vasiri kushandisa mukana uyu, vari kurasikirwa zvakanyanya. Nekuvaka yavo yega yekumaka zano yakanangana neLinkedIn vhidhiyo, ini ndakakwanisa kukura bhizinesi rangu kune anopfuura a
Hunhu 8 Hunhu hwe "V" e Yakanaka Brand
Monday, May 18, 2020 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Kwemakore ini ndaiwanzo poo-poo iyo pfungwa yekumaka. Boka revanobata-vanotya vanhu vachipokana nezve hue yegirini mune logo yakaratidzika kunge yekunyepedzera kwandiri. Saizvozvowo mutengo wemutengo wemasangano ekumaka ayo aibhadharisa makumi kana kunyange mazana ezviuru zvemadhora. Mbiri yangu iri muinjiniya. Iyo chete kodhi kodhi yandaitarisira yaive kuisa waya pamwechete. Basa rangu raive rekugadzirisa zvainge zvatyoka ndozozvigadzirisa.
Ndeipi iyo ROI yeMutengi Akavimbika?
Chishanu, December 15, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Isu takabvisa chibvumirano chitsva nevemabhizimusi vatengi vanobudirira nyanzvi, Bolstra. Bolstra isoftware solution (SaaS) inopa Bhizinesi kumabhizinesi eBusiness anotarisa kuwedzera mari yavo inodzokororwa nekudzora churn uye kuzivisa mikana yekuwedzera. Mhinduro yavo, ine yakavakirwa-mukati maitiro akanaka, inobatsira kambani yako kutyaira izvo zvaunoda zvinoda izvo vatengi vako vanoda. Kwemakore mashoma apfuura, sezvo rwendo rwedu rwekushambadzira rwakachinja uye isu tinoongorora kukura kwebhizimusi 'kushambadzira
Kwete Masangano Akakwana Anotaurira Tarisiro Yekutora Kufamba
Mugovera, December 3, 2016 Mugovera, December 3, 2016 Douglas Karr
Chimwe chezvishamiso zvangu mukuvhura agency yedu makore manomwe apfuura ndechekuti ndakafunga kuti indasitiri ye agency yakavaka zvakanyanya pahukama kupfuura iko kukosha kwemasevhisi. Ini ndingatoenda kusvika pakutaura kuti zvakare zvakanyanya zvinoenderana nezvakanaka zvehukama zvakare. Mutengi wako akavimba newe uye wave uchishanda navo kwemakore? Zvakanaka, izvo zvinotungamira mukuendeswa uye kuenderera hukama hune hutano.